Maamulayaasha dhibaataysan ee horyaalka - BBC News Somali
Maamulayaasha dhibaataysan ee horyaalka
6 Oktoobar 2015
Image caption Jurgen Klopp ayaa la filayaa inuu noqdo maamulaha Liverpool.
Tababarihii hore ee kooxda Borussia Dortmund ayaa ugu horreeya ragga la filayo inay jagadaas buuxiyaan, iyadoo sidoo kale uu tartanka ku jiro tababarihii hore ee Chelsea Carlo Ancelotti.
Klopp, oo ah 48 jir u dhashay Jarmalka, waxaa la sheegay inuu diyaar u yahay inuu ku soo wareego Liverpool.
Wada hadallo lala leeyahay wakiilladiisa ayaa si wanaagsan u socda waxaana uu naadigu doonayaa in tababare cusub uu qaato si uu kooxda ugu diyaariyo ciyaar ay la yeelan doonaan kooxda Tottenham 17 Oktoobar.
Tababarihii hore Rodgers, oo 42 jir ah, waxaa uu sheegay inuu ka xun yahay in ay dhammaatay muddo saddex sano iyo bar ah oo maamulayay kooxda Liverpool oo uu sheegay inay ka mid tahay kooxaha adduunka ugu fiican. Waxaa dhici doona wada hadallo ku saabsan sidii loo sagootin lahaa oo laga yaabo inay Liverpool ugu kacdo lacag ka badan shan milyan oo geniga Ingiriiska ah.
Dhinaca kale, Sunderland ayaa ka fekeraysa inay soo qaadato tababaraha kooxda Real Sociedad, David Moyes iyagoo raadinaya tababaraha beddelaya Dick Advocaat oo Axaddii shaqadaas iska casilay.
Waxay rajeynayaan inay tababare cusub magacaabaan ka hor ciyaarta ay la yeelan doonaan West Brom 17 Oktoobar.
Waxaa kaloo jagadan diyaar u ah tababarayaasha kala ah: Sam Allardyce iyo Nigel Pearson iyo Sean Dyche oo isagu ugu horreeya dadka la filayo inay shaqadaas helaan.
Sunderland xilli-ciyaareedkan weli mar qura ma badin.
Arrin kuwaas oo dhan ka duwan, naadiga Chelse ayaa taageero buuxda u muujiyay tababarahooda, Jose Mourinho, oo kooxdiisa horyaalka difaacanaysa ay haatan ku jirto kaalinta 16aad iyadoo siddeed ciyaarood ka heshay siddeed dhibcood oo keliya.
Hase yeeshee maamulaha Chelsea, Jose Mourinho, waxaa dacwad u haysta xiriirka kubbadda cagta ee Ingiriiska kaddib markii uu sheegay in ciyaartii ay 3-1 uga badisay Southampton uu garsooruhu ka eexday kooxdiisa oo rigoore uu u dhigi waayay.